ZTE wuxuu ka tagayaa iibinta mobilada sababo la xiriira xayiraada Mareykanka | Androidsis
Kuwani maahan waqtiyo wanaagsan ZTE. Shirkada Shiinaha ee soo saarta mobilada ayaa wajaheysa xayiraada Mareykanka, oo balan qaaday inay saameyn weyn ku yeelan doonto ganacsigeeda. Waqtigaan la joogo, shirkaddu wax ganacsi ah lama sameyn karto shirkad Mareykan ah muddo 7 sano ah. In kasta oo ay tani saamayn ku yeelanayso shirkadda heerar kala duwan. Marka iyagu way qaataan go'aanka joojinta iibinta taleefannada adduunka.
ZTE waxay ku dhawaaqday inay joojiyeen howlahoodii shaqo ee ugu weynaa. Kuwaas waxaa ka mid ah iibinta mobilada. Go'aan saameyn ku leh ururka oo dhan oo saameynaya sii waditaankiisa muddada dheer ee suuqa.
In kasta oo ay tahay tallaabo ku meel-gaadh ah, haddana shirkadda ayaa tirtirtay taleefannadeedii ama xiriirinno kuu oggolaanaya inaad ka iibsato degelkeeda iyo kuwa kale oo badan. Dhab ahaan, Websaytka Isbaanishka ee ZTE ma sii jiro. Marka shirkaddu waxay dhigeysaa wax walba oo macquul ah si aan taleefannadeeda loo iibsan karin.
Muddo intee ah ayey tani dhici doontaa aan laga faalloon. Waxaa jira warbaahino aan hubin inay ku meelgaar noqonayso iyo inkale. In kasta oo laga soo qaatay ZTE waxay cadeynayaan inay ka shaqeynayaan xal u helida dhibaatadan. Marka waan arki doonaa haddii ay ku dhawaaqaan wax kale mustaqbalka.
Tani waa go'aan aan caadi aheyn oo leh cawaaqib xumo. Maxaa intaa ka badan, waxay u adeegtaa inay shidaal ku darto dabka xaaladda u dhexeysa Shiinaha iyo Mareykanka. Maaddaama labada dalba ay haatan dhexda uga jiraan dagaal ganacsi, kaas oo ballanqaadaya inuu sii xoogeysto ka dib xayiraaddan shirkadda.
ZTE waxbadan kama aysan sheegin xaalada. Sidaa awgeed Waxaan rajeyneynaa inaan ogaanno faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mustaqbalkooda iyo haddii ay ku soo noqon doonaan iibinta mobilada mar uun. In kasta oo xilligan la joogo ay umuuqato in arrimuhu aysan sifiican u dhameystirin rinjiyeynta. Sideed u aragtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE wuxuu joojiyaa iibinta mobilada aduunka si kumeel gaar ah